waxaa qoray Arenti Smart markay ahayd 19/05/21
Hangzhou - Maajo 19, 2021 - Arenti, oo ah hormuudka bixiyaha kaameeraha amniga guriga ee IoT smart, ayaa maanta ku dhawaaqay iskaashi ay la leedahay Visiotech oo ah qaybiyaha loogu talagalay Naqshadeynta Red Dot 2021 iyo iF Design 2021 oo la siiyay Arenti Smart Home Security Camera. Calaamadaha iskaashiga cusub ayaa ah ...
waxaa qoray Arenti Smart markay ahayd 13/04/21
Hoofddorp, Abriil 13, 2021 - Arenti wuxuu ku guuleystay abaalmarinta IF Design Design AWF ee sannadkan, abaalmarinta naqshadeynta adduunka ee caanka ah. Badeecada guuleysatay, Taxanaha Arenti Optics Smart Home Security Series, waxay ku guuleysatay anshaxa alaabta, kaamerada amniga iyo qeybta albaabka. Sannad kasta, ...
waxaa qoray Arenti Smart markay ahayd 22/03/21
Hangzhou - Mar 9, 2021 - Arenti, oo ah hormuudka bixiyaha kaameeraha amniga guriga ee IoT smart, ayaa maanta ku dhawaaqay inay xoojineyso joogitaankeeda Mongolia oo ay weheliso lamaane cusub Topica LLC oo ah qaybiyaha dhammaan taxaneheeda wax soo saarka. Th ...
Arenti wuxuu u magacaabay Eleczar inuu noqdo qaybiyaha maxalliga ah ee Morocco
Hangzhou - Diseembar 24, 2021 - Arenti, oo ah hormuudka bixiyaha kamaradaha amniga guriga ee IoT smart, ayaa maanta ku dhawaaqay inay bilaabayaan joogitaankeeda Morocco iyadoo Eleczar uu yahay qaybiyaha noocyadiisa kala duwan ee taxanaha ah. Wada -hawlgalayaasha cusub ...
waxaa qoray Arenti Smart 20/03/21
Hangzhou - Jan. 1, 2021 - Arenti, oo ah hormuudka bixiyaha kaameeraha amniga guriga ee IoT smart, ayaa maanta ku dhawaaqay inay xoojineyso joogitaankeeda Vietnam oo leh lamaane cusub ITM Management oo ah qaybiyaha noocyadiisa kala duwan ee taxanaha. ...